ဧပွီ ၂၅, ၂၀၁၃ - ၁၂:၀၀ နံနကျ
News Code : 412980
Source : မြန်မာမီဒီယာ
လူမျိုးရေး ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း မဖြစ် ဖြစ်အောင် နိုးဆော်နေသည့် အစွန်းရောက် ဘုန်းကြီး ဝီရသူ
မကြာသေးခင်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူနည်းစုမွတ်စလင်များအား လူမဆန်စွာ ပစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်မှုတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှ အစွန်းရောက် ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုသည် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အနည်းဆုံး လူ ၄၀ သေဆုံးခဲ့ရပြီး ၁၂၀၀၀ ခန့် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရနှင့် နိုင်ငံတစ်ဝှန်းရှိ ကြီးမားသည့်လူမျိုးရေးခွဲခြားသူများအကြားက ဘုန်းတော်ကြီးများဦးဆောင်သည့် အဆိုပါအဖွဲ့ကို အပြင်ပန်းမှ အပေါ်ယံအားဖြင့်နားလည်နိုင်ရန် ခက်ခဲလှသည်။ ၄င်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအချက်အလက်များကို စူးစမ်းလေ့လာမှု မပြုဘဲနှင့် နားလည်အောင်ရှင်းပြ၍ မရနိုင်ပေ။
(၁) ဗုဒ္ဓဘာသာနာဇီလက်သစ် အုပ်စုကို အရေးမယူဘဲ နိုင်ငံတော်မှ မျက်နှာသာ ပေးထားခြင်း။ (၂) လူနည်းစုမွတ်စလင်များအား မျိုးဖြုတ်သုတ်သင်ရန် လက္ခဏာများ မြင်တွေ့နေရသော်လည်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှာ အရေးယူဆောင်ရွက်မှု မရှိခြင်း။ (၃) ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်နေစဉ်တစ်လျှောက်တွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်သည့် အတိုက်အခံများ(အများစု)က လစ်လျူရှုထားခြင်း တိြု့ဖစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ အကြမ်းဖက်မှုများက နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး၏ အနာဂတ်အလားအလာ၊ မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ပက်သက်ပြီး အရေးပါသော မေးခွန်းမြောက်များစွာကို ပေါ်ထွက်လာစေသည်။
** ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုသည် မည်မျှအတိုင်းအတာအထိ လူကြိုက်များ၍ ပျံ့နှံ့နေပြီနည်း ? နိုင်ငံတစ်ဝှန်းလုံး ပြန့်နှံ့သွားဖို့ အလားအလာ မည်မျှ ရှိနေပါသနည်း ?
အမျိုး၊ ဘာသာ သန့်ရှင်းရေး ဟူသည့် ကြွေးကြော်သံနှင့် သစ်လွင်သော အမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှု၊ အတွေးမှားအမြင်မှားများ စိမ့်ဝင်နေသည့်ှဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူစု၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်စီးပွားရေးကို အခြေပြုထားသည့် အမျိုးသားရေးဝါဒ စသည်တို့မှာ ၁၉၃၀ ခုနှစ်က ဂျာမဏီ၌ ခေါင်းထောင်လာခဲ့သည့် နာဇီဝါဒနှင့် ကွဲပြားမှုမရှိ ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်နေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ၉၆၉ လှုပ်ရှားမှုမှာ အောက်ပါအချက်သုံးချက်ကြောင့် လူကြိုက်များလာခြင်းဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်ရပေသည်။
ပထမအချက် – နိုင်ငံတစ်ဝှန်း အချိတ်အဆက်ကောင်းသည့် ဗုဒ္ဓဘာသာကောလိပ်များမှ (၉၆၉ ခေါင်းဆောင် ဦးဝီရသူကဲ့သို့ ) အစွန်းရောက်ဘုန်းကြီးများက နိုင်ငံအတွင်းရှိ စီးပွားရေးအကြပ်အတည်း၊ ယဉ်ကျေးမှုယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းနှင့်ပက်သက်၍ “ မြန်မာလူမျိုးများမှာ မွတ်စလင်တို့၏ စီးပွားရေးအရ ဂုတ်သွေးစုတ် အမြတ်ထုတ်ခြင်းကိုခံနေရသော သားကောင်များ ” အဖြစ်ပုံဖော်ကာ နိုင်ငံတွင်းရှိ မွတ်စလင်များအား တရားခံအဖြစ် စွပ်စွဲပြောဆိုနေခြင်း။
ဒုတိယအချက် – ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူများစုအတွင်း ခေတ်ကာလကြာရှည်စွာရှိနေသော (လူပြိန်းကြိုက် မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး) လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဝါဒကို ဆွဲယူအသုံးချခြင်း။
တတိယအချက် - ရဲတပ်ဖွဲ့၊ ထောက်လှမ်းရေး၊ စစ်တပ်၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ အပါအ၀င် နိုင်ငံအတွင်း နယ်ပယ်စုံမှ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအဖွဲ့လက်အောက်ရှိ အသင်းအဖွဲ့အားလုံးနီးပါးက အဆိုပါ နာဇီလက်သစ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုကို အရေးမယူသည်သာမက သွယ်ဝိုက်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
** အစွန်းရောက်လှုပ်ရှားမှုကို ပြည့်ပြည့်၀၀ ထိန်းချုပ်ရန် နေပြည်တော်အစိုးရအနေဖြင့် မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်နေသနည်း ?
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က မြန်မာပြည်အနောက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ရိုဟင်ဂျာများအပေါ် ပတ်မှတ်ထားသော မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဦးသိန်းစိန်မှ လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာတွင် လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုများ ပြန့်ပွားနေမှုအတွက် ဘုန်းကြီးများနှင့်နိုင်ငံရေးပါတီများကို ပြစ်တင်ပြောဆိုထားသည်။ သို့သော် သူ၏အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ ရိုဟင်ဂျာတို့အားဦးတည်သည့် လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုများ သို့မဟုတ် မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေးများကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် လူသိရှင်ကြား လှုံ့ဆော်ခဲ့သော မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ အရေးယူခဲ့ခြင်းဟူ၍ မရှိချေ။ ထိုမျှမက နိုင်ငံအတွင်း မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ရပ်များကို လုပ်ဆောင်လျက်၊ မွတ်စလင်များနှင့် နိုင်ငံရေးရာအတွင်း ၎င်းတို့၏ပါဝင်ပက်သက်နေမှုများကို တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် ဖယ်ထုတ်ရှင်းလင်းရန် ဆော်သြောလှုံ့ဆော်နေကြသည့် ဘုန်းကြီး တစ်ဦးတစ်လေသော်မှ ထိန်းသိမ်း ဟန့်တားနိုင်ခြင်း မရှိခဲ့ချေ။
“ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ ဘုန်းတော်ကြီးအချို့နှင့် အခြား တသီးပုဂ္ဂလ ပုဂ္ဂိုလ်များက လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုများကို မြင့်မားအောင် လုပ်ဆောင်နေသည်။ နိုင်ငံ အတွင်း နှင့် နိုင်ငံပြင်ပရှိ (ရခိုင်) လူ့အဖွဲ့အစည်းများအား ချဉ်းကပ် ၍လည်း လှုံ့ဆော်နေကြသည် ” ဟု ယမန်နှစ် သြဂုတ်လက လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းသည့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ အစီရင်ခံစာတွင် ဖေါ်ပြထားသည်။ လူအုပ်စုကြီး၏အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေမှုကို ရဲဝန်ထမ်းများက မည်သို့မျှ အရေးမယူဘဲ ရပ်ကြည့်နေမှုအား သိမြင်ရပြီးနောက် အနောက်နိုင်ငံရှိ မီဒီယာများက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန်ဖော်ပြခဲ့ကြသော ဦးသိန်းစိန်၏ သည်းခံခြင်းတရားထားရှိ၍ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ရန် အားပေးသောစကား (နှင့်) အနောက်မီဒီယာများကပင် တင်ပြရန်ပျက်ကွက်ခဲ့သော အစိုးရ၏ မထိန်းသိမ်းခဲ့မှု တို့ကြားတွင် ဆက်စပ်၍မရသည့် ကွာဟမှုတစ်ခုရှိနေသည်။
မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး ဒီဗီဒီများ၊ စီဒီခွေများနှင့် အခြား ၀ါဒဖြန့်ချိသည့်အရာများအားလုံးကို မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် အလွယ်တကူ တွေ့မြင်နိုင်သည်။ ပို၍ပွင့်လင်းလာသည့်တိုင်းပြည်ရှိ လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် မွတ်စလင်ဆန့်ကျင်ရေး အချက်အလက်များ၊ အမုန်းတရားများကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည့် ရှုထောင့်များမှပြောဆိုမှုတို့မှာ တရားဝင် ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေသည်။ သတ္ထုတွင်းဝန်ကြီးဌာန၏ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့်ပက်သက်၍ သတင်းဆောင်းပါး တစ်ပုဒ်ကို ဖော်ပြခဲ့သော the Voice Weekly ဂျာနယ်ကို အစိုးရမှ တရားစွဲခဲ့သော်လည်း တိုင်းပြည်အတွင်းရှိ မွတ်စလင်များအား အသရေဖျက်မှုများ၊ မွတ်စလင်များနှင့် ပက်သက်သည့် ကောလဟလများ၊ တလွဲတချော်အချက်အလက်များအား ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ရိုက်နှိပ